जन्म लिन - विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड
भगवान > छोरा > मृत्युको जन्म भयो
क्रिश्चियन विश्वासले यो सन्देशको घोषणा गर्दछ कि उचित समयमा परमेश्वर का पुत्र एक पूर्वनिर्धारित ठाउँ मा मासु बन्नुभयो र हामी मानिसहरु को बीचमा बस्नुभयो। येशू यस्तो उल्लेखनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कि कसैले उनको मानव हुनुमा प्रश्न उठाए। बाइबल मा बारम्बार जोड दिईन्छ कि शरीर मा भगवान - एक महिला बाट जन्मेको - वास्तव मा एक मानव थियो, त्यो हो, हाम्रो पापीपन को बाहेक, उहाँ हरेक मा हाम्रो जस्तै हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १:१४; गलाती ४: ४; फिलिप्पी २:;; हिब्रू २:१))। उनी वास्तवमा मानव थिए। येशू ख्रीष्ट को अवतार सामान्यतया क्रिसमस मा मनाईन्छ, भले ही यो वास्तव मा मरियम को गर्भावस्था संग शुरू भयो, 1,14 मार्च मा परम्परागत क्यालेन्डर अनुसार, घोषणा को पर्व (पहिले को अवतार वा भगवान को अवतार को पर्व पनि भनिन्छ)।
ख्रीष्ट क्रूसमा टाँगिनुभयो
येशू को अवधारणा र जन्म को रूप मा हाम्रो विश्वास को लागी महत्वपूर्ण हुन सक्छ, उनीहरु विश्वास को सन्देश मा धेरै पहिलो स्थान मा छैनन् कि हामी संसारमा बोक्छौं। जब पावलले कोरिन्थमा प्रचार गरे, उनले धेरै उत्तेजक सन्देश दिए: ख्रीष्टको क्रूसमा टाँगिएको (१ कोरिन्थी १:२३)।
ग्रीको-रोमन संसारले जन्मेका देवताहरूका कथाहरू जान्दछौं, तर कसैले क्रूसमा टाँगिएको कुरा सुनेका थिएनन्। यो विवेकी थियो - जस्तै मानिसहरूलाई मुक्ति दिने यदि तिनीहरू केवल कार्यान्वयन गरिएको अपराधीमा विश्वास गर्दछन्। तर कसरी यो सम्भव छ कि एक अपराधी द्वारा छुटकारा पाउन सम्भव छ?
तर त्यो ठीक बिन्दु थियो - परमेश्वरको पुत्रले क्रुस मा एक अपराधी जस्तै लाजमर्दो मृत्यु भोग्नुभयो र तब मात्र पुनरुत्थान को माध्यम बाट महिमा प्राप्त भयो। पत्रुसले महासभालाई बुझाए: "हाम्रा पुर्खाहरुका परमेश्वरले येशूलाई उठाउनुभयो ... भगवानले उहाँको दाहिने हातबाट राजकुमार र मुक्तिदाता बन्नुभयो, इस्राएललाई पश्चाताप र पापहरुको क्षमा दिन" (प्रेरित ५: ३०-३१)। येशू मरेकाहरुबाट बौरी उठ्नुभयो र उच्च पारियो ताकि हाम्रा पापहरु लाई छुटकारा दिइनेछ।
यद्यपि, पत्रुस कथाको लाजमर्दो अंशमा जान असफल भएनन्: "... जुन तपाईंले काठमा झुण्ड्याएर मार्नुभयो।" "काठ" भन्ने शव्दले निस्सन्देह व्यवस्था २१:२ faith मा यहूदी धर्मगुरुहरूलाई यी शब्दहरूको सम्झना गरायो: "... फाँसी दिइएका मानिसलाई परमेश्वर श्रापित गरिएको छ।"
गीज! पत्रुसले किन यो कुरा उठाउनु परेको थियो? उनले सामाजिक political राजनैतिक चट्टानलाई रोक्ने प्रयास गरेनन्, बरु होशियारीसाथ यो पक्षलाई समेटेका थिए। उहाँको सन्देश मात्र होइन कि येशू मर्नुभयो, तर यो बेइमानी तरिकामा। न केवल सन्देश को यो हिस्सा थियो, यो यसको केन्द्रीय सन्देश थियो। जब पावल कोरिन्थ मा प्रचार गरे, उनको प्रचार को केन्द्रीय चिन्ता मात्र को रूप मा ख्रीष्ट को मृत्यु को रूप मा बुझ्न को लागी थिएन, तर क्रूस मा उनको मृत्यु (१ कोरिन्थी १:२३)।
गलाटिया मा उहाँले स्पष्ट रूप मा एक विशेष रूप देखि जीवन्त अभिव्यक्ति को उपयोग गर्नुभयो: "... जसको लागी येशू ख्रीष्ट क्रूसमा टाँगिएको को रूप मा उनीहरुको आँखा को सामने चित्रित गरीएको थियो" (गलाती ३: १)। पावललाई यस्तो भयानक मृत्युलाई जोड दिनको लागी किन यति धेरै जोड दिनु पर्‍यो कि धर्मशास्त्रले परमेश्वरको श्रापको पक्का संकेतको रूपमा देखेको छ?
के त्यो आवश्यक थियो?
किन येशू पहिलो स्थानमा यस्तो भयानक मृत्यु भोग्नुभयो? पॉल सायद यो प्रश्न संग जुध्न एक लामो समय बिताएको थियो। उसले उठेको ख्रीष्टलाई देखेको थियो र जान्दछ कि भगवानले मसीहलाई यसै व्यक्तिमा पठाउनुभएको थियो। तर भगवानले किन त्यो अभिषिक्त व्यक्तिलाई मृत्युमा जान दिनु पर्छ जसलाई धर्मशास्त्रले श्रापको रुपमा लिन्छ? (त्यसोभए मुसलमानहरु पनि विश्वास गर्दैनन् कि येशू क्रुसमा टाँगिनुभएको थियो। उनीहरुको नजरमा उनी एक अगमवक्ता थिए, र भगवानले सायद कहिल्यै उसलाई त्यस्तो क्षमता मा यस्तो हुन दिनुहुने थियो। उनीहरु तर्क गर्छन् कि येशूको सट्टामा अरु कसैलाई क्रूसमा टाँगिएको थियो। भएको।)
र साँच्चै, येशूले Gethsemane को बगैंचा मा प्रार्थना गर्नुभयो कि उहाँको लागी अर्को बाटो हुन सक्छ, तर त्यहाँ थिएन। हेरोद र पिलातसले मात्र त्यो काम गरे जो भगवान "यो हुनु पर्छ भनेर पूर्वनिर्धारित थियो" - अर्थात्, कि उनी यसरी मर्नु पर्छ, जो श्रापित थियो (प्रेरित ४:२;; ज्यूरिख बाइबल)।
किन? किनकि येशू हाम्रा लागि मर्नुभयो - हाम्रा पापहरुको लागी - र हाम्रो पापको कारणले गर्दा हामीमाथि श्राप छ। हाम्रा साना साना गल्तीहरु, भगवान को सामुन्ने तिनिहरुको निन्दा मा, एक क्रूस को राशि मा। सबै मानवता पाप को दोषी हुन को लागी एक श्राप को अधीनमा छ। तर सुसमाचार, सुसमाचार, यो प्रतिज्ञा गर्दछ: "ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ, किनकि उहाँ हाम्रा लागि सराप बन्नुभयो" (गलाती ३:१३)। येशू हामी प्रत्येक को लागी क्रूसमा टाँगिएको थियो। उहाँले पीडा र शर्म लिनुभयो हामी साँच्चै सहन को लागी योग्य छौं।
यद्यपि यो बाइबलले हामीलाई देखाउँदछ कि ती एक मात्र समानता होइन, र पावल केवल एक पत्रमा यस विशेष दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्दछन्। धेरै चोटि नभए पनि, उहाँ केवल येशू "हाम्रो निम्ति मर्नुभयो" भन्नुहुन्छ। पहिलो नजरमा, यहाँ छानिएको वाक्यांश केवल एक साधारण आदानप्रदान जस्तो देखिन्छ: हामी मृत्युको योग्य हौं, येशूले स्वेच्छाले हाम्रोलागि मर्नको लागि प्रस्ताव गर्नुभयो, र त्यसैले हामी यसबाट बच्न सक्छौं।
जे होस्, यो त्यति सरल छैन। एउटा कुरा को लागी, हामी मानिसहरु अझै मरिरहेका छौं। र फरक दृष्टिकोण बाट, हामी ख्रीष्ट संगै मर्छौं (रोमी:: ३-५)। यस सादृश्य अनुसार, येशूको मृत्यु दुबै हाम्रा लागि विषाक्त थियो (उहाँ हाम्रो ठाउँमा मर्नुभयो) र सहभागी (त्यो हो, हामी उहाँ संग मरेर उहाँको मृत्यु को हिस्सा); जसले यो धेरै स्पष्ट पार्छ के महत्त्वपूर्ण छ: हामी येशू को क्रूस को माध्यम बाट छुटकारा पाएका छौं, त्यसैले मात्र ख्रीष्ट को क्रूस को माध्यम बाट बचाउन सकिन्छ।
येशू आफैंले चुन्नुभएको अर्को सादृश्य एक तुलना को रूप मा फिरौती को उपयोग गर्दछ: "... मानिसको पुत्र सेवा गर्न को लागी आएन, तर सेवा गर्न र धेरै को लागी फिरौती को रूप मा आफ्नो जीवन दिन" (मार्क १०:४५) जस्तै हामी एक दुश्मन द्वारा कैदी राखिएको थियो र येशूको मृत्यु हाम्रो स्वतन्त्रता सुनिश्चित भयो।
हामी पनि स्वतन्त्र किन्थ्यौं भनेर पावलले यो कुरा तुलना गर्दछन्। यो शब्दले दास बजारका केही पाठकहरूलाई सम्झाउन सक्दछ, अन्य कतिपय मानिसहरूले इजिप्ट छोडेर आएका इस्राएलीहरूलाई। दासहरू दासत्वबाट निःशुल्क किन्न सकिन्थ्यो, र त्यसैले परमेश्वरले पनि मिश्रदेशबाट इस्राएलका मानिसहरूलाई किन्नुभयो। आफ्नो छोरालाई पठाएर, स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो बुबाले हामीलाई असाध्यै किन्नुभयो। उहाँ हाम्रो पापको लागि दण्ड लिनुभयो।
Colossians 2,15 मा फरक तस्वीर तुलना को लागी प्रयोग गरीएको छ: «... उसले बिल्कुल शक्तिहरु र शक्तिहरु लाई हतियार र सार्वजनिक प्रदर्शन मा राखेको छ। उहाँमा [क्रसमा] उनले उनको held (एल्बेरफेल्ड बाइबल) माथि विजय हासिल गरे। यहाँ खिचिएको तस्वीर एक विजय परेड को प्रतिनिधित्व गर्दछ: विजयी सैन्य नेता शहर मा शृंखलाहरु मा निशस्त्र, अपमानित कैदीहरु लाई ल्याउँछ। कलस्सीहरुलाई लेखेको यो अनुच्छेदले यो स्पष्ट गर्दछ कि येशू ख्रीष्ट, आफ्नो क्रूसमा टाँगेर, उहाँका सबै शत्रुहरुको शक्ति तोड्नुभयो र हाम्रो लागी विजयी हुनुहुन्थ्यो।
बाइबलले चित्रमा मुक्तिको सन्देश दिन्छ न त विश्वासको स्थिर, अचल फारामको रूपमा। उदाहरणको लागि, येशूको बलिदानरूपी मृत्युले बाइबलले प्रयोग गरेको धेरैवटा छविमध्ये एउटाको सट्टा केवल महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट पार्न प्रयोग गरेको छ। जसरी पापको बारेमा विभिन्न तरिकाले वर्णन गरिएको छ, त्यसरी नै हाम्रा पापहरु उद्धार गर्न येशूले गर्नुभएको काम फरक ढ .्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यदि हामी पापलाई व्यवस्थाको उल्लंघन मान्दछौं भने, हामी क्रूसमा क्रूसमा हाम्रो सजायको सट्टा सजायको कार्य देख्न सक्छौं। यदि हामी यसलाई परमेश्वरको पवित्रता उल्ल .्घनको रूपमा हेर्दछौं भने, हामी येशूमा यसको लागि आउँदो प्रायश्‍चितको बलिदान देख्छौं। यदि यसले हामीलाई प्रदूषित गर्दछ भने, येशूको रगतले हामीलाई धुन्छ। यदि हामी आफूलाई उनको वशमा परेको देख्छौं, येशू हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, हाम्रो विजयी उद्धारक हुनुहुन्छ। जहाँ उनीहरू दुश्मनी छर्दछन्, येशू मेलमिलाप ल्याउनुहुन्छ। यदि हामी यसमा अज्ञानता वा मूर्खताको चिह्न देख्छौं भने, यो येशू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। यी सबै चित्रहरू हाम्रो लागि सहयोगी छन्।
के परमेश्वरको क्रोध हटाउन सकिन्छ?
ईश्वरहीनताले परमेश्वरको क्रोध निम्त्याउँछ, र यो "क्रोधको दिन" हुनेछ जसमा उसले संसारको न्याय गर्दछ (रोमी १:१1,18; २: ५)। जो "सत्य को अवज्ञा" दण्डित गरिनेछ (v। 2,5)। भगवान मानिसहरुलाई माया गर्नुहुन्छ र बरु उनीहरुलाई परिवर्तन भएको देख्न चाहानुहुन्छ, तर जब उनीहरु जिद्दीको विरोध गर्दछन् तब उनी उनीहरुलाई दण्ड दिन्छन्। जो कोहि परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह को सत्य बाट आफूलाई बन्द गर्दछ उसको सजाय पाउनेछ।
एक क्रोधित व्यक्ति को विपरीत जो शान्त हुनु भन्दा पहिले खुसी हुनु पर्छ, उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र सुनिश्चित गर्नुभयो कि हाम्रा पापहरु माफ गर्न सकिन्छ। त्यसोभए तिनीहरू केवल मेटिएनन्, तर येशूलाई वास्तविक परिणामको साथ दिइयो। "उहाँले कुनै पाप थाहा पाउनुहुन्न उसलाई हाम्रो लागी पाप हुन" (२ कोरिन्थी ५:२१; ज्यूरिख बाइबल)। येशू हाम्रा लागि श्राप बन्नुभयो, उहाँ हाम्रा लागि पाप बन्नुभयो। जसरी हाम्रा पापहरु उहाँलाई दिइयो, उसको धार्मिकता हामी लाई दिईयो "कि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सक्छौं" (उही पद)। परमेश्वरले हामीलाई न्याय दिनुभएको छ।
परमेश्वरको धार्मिकता को प्रकाश
सुसमाचारले परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट गर्दछ - कि उहाँले हामीलाई निन्दा गर्नुको सट्टामा हामीलाई माफ गर्न धार्मिकताको नियम बनाउनुहुन्छ (रोमी १:१1,17)। उहाँ हाम्रा पापहरुलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न, तर येशू ख्रीष्टको क्रूसमा टाँगेर उनीहरुको ख्याल राख्नुहुन्छ। क्रस परमेश्वरको धार्मिकता (रोमी ३: २५-२3,25) र उहाँको प्रेम (५:)) को चिन्ह हो। यो धार्मिकता को लागी खडा छ किनकि यो पर्याप्त रूप मा मृत्यु द्वारा पाप को सजाय को प्रतिबिम्बित गर्दछ, तर एकै साथ मा प्रेम को लागी किनकि क्षमा गर्नेले स्वेच्छाले पीडा स्वीकार गर्दछ।
येशूले हाम्रा पापहरुको मूल्य चुकाउनुभयो - पीडा र लाज को रूप मा व्यक्तिगत मूल्य। उहाँले क्रूस को माध्यम बाट मेलमिलाप (व्यक्तिगत संगति को बहाली) प्राप्त गर्नुभयो (कलस्सी १:२०)। जब हामी दुश्मन थियौं, उहाँ हाम्रो लागी मर्नुभयो (रोमी ५:))।
न्याय कानून पालन गर्ने भन्दा बढी हो। दयालु सामरीले कुनै कानून पालन गरेन कि ऊ घाइतेहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ, तर उसले सहयोग गरेर सही काम गर्‍यो।
यदि यो हाम्रो शक्ति मा एक डुबेको व्यक्ति लाई बचाउन को लागी हो, हामी यो गर्न संकोच गर्नुहुन्न। र यसैले यो एक पापी संसार बचाउन को लागी भगवान को शक्ति मा थियो, र उहाँले यो येशू ख्रीष्ट पठाएर गर्नुभयो। "... यो हाम्रा पापहरुको प्रायश्चित हो, हाम्रा लागि मात्र होइन, सारा संसारका पापहरुको लागी" (१ यूहन्ना २: २)। उहाँ हामी सबैको लागी मर्नुभयो, र उहाँले त्यसो गर्नुभयो "जब हामी अझै पापी थियौं"।
हामीप्रति भगवानको अनुग्रह उहाँको धार्मिकताको चिन्ह हो। उहाँले हामीलाई धार्मिकता दिएर धर्मी काम गर्नुहुन्छ भले हामी पापी हौं। किन? किनकि उहाँले ख्रीष्टलाई हाम्रो धार्मिकता बनाउनुभयो (१ कोरिन्थी १:३०)। जब देखि हामी ख्रीष्ट संग एकताबद्ध छौं, हाम्रा पापहरु उहाँमा जान्छन् र हामी उहाँको धार्मिकता प्राप्त गर्दछौं। तेसैले हामी आफैं बाट हाम्रो धार्मिकता छैन, तर यो भगवान बाट आउँछ र हाम्रो विश्वास को माध्यम बाट हामीलाई दिइएको छ (फिलिप्पी ३:))।
«तर म परमेश्वरको सामु धार्मिकताको कुरा गर्दैछु, जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर विश्वास गर्ने सबैलाई आउँछ। किनकि यहाँ कुनै फरक छैन: उनीहरु सबै पापी हुन् र उनीहरुसंग भगवान संग हुनु पर्ने महिमा को अभाव छ, र ख्रीष्ट येशू को माध्यम बाट आएको छुटकारा को माध्यम बाट उहाँको अनुग्रह बाट योग्यता बिना धर्मी ठहरिएका छन्। भगवानले यो विश्वास को लागी उसको रगत मा प्रायश्चित को लागी आफ्नो धर्मीकरण को समय मा पहिले गरीएको पापहरु माफी गरेर उसको धार्मिकता प्रमाणित गर्न को लागी स्थापित गरीएको छ, अब यस समयमा उसको धार्मिकता देखाउन को लागी, कि ऊ आफैं मात्र हो र मात्र बनाउँछ। उहाँ जो येशूमा विश्वास गरेर हुनुहुन्छ (रोमी ३: २२-२3,22)।
येशूको प्रायश्चित सबैको लागी थियो, तर उहाँमा विश्वास गर्नेहरु मात्र यसको साथ आशिर्वाद पाउनेछन्। सत्य स्वीकार गर्नेहरुले मात्र अनुग्रहको अनुभव गर्न सक्छन्। यस तरीकाले हामी उहाँको मृत्युलाई हाम्रो रूपमा चिन्छौं (हाम्रो सट्टामा उहाँ द्वारा पीडित मृत्युको रूपमा, जसमा हामी भाग लिन्छौं); र उहाँको सजाय जस्तै, त्यसैले हामी पनि हाम्रो जित को रूप मा उहाँको विजय र पुनरुत्थान को मान्यता दिन्छौं। तेसैले भगवान आफैंमा सत्य हुनुहुन्छ - दयालु र न्यायी हुनुहुन्छ। पापलाई पापीहरु जत्तिकै बेवास्ता गरिन्छ भगवानको दया न्याय मा विजयी हुन्छ (याकूब २:१३)।
क्रूसको माध्यमबाट, ख्रीष्टले सारा संसारमा मेल मिलाप गर्नुभयो (२ कोरिन्थी ५: १)। हो, क्रस को माध्यम बाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भगवान संग मेल मिलाप छ (कलस्सी १:२०)। सबै सृष्टिको मुक्ति छ किनकि येशूले के गर्नुभयो! यो साँच्चै कुनै पनी हामी मुक्ति शब्द संग जोडिएको भन्दा बाहिर जान्छ, हैन?
तल्लो रेखा यो हो कि हामी येशू ख्रीष्ट को मृत्यु को माध्यम बाट छुटकारा पाएका छौं। हो, यही कारणले उहाँ मासु हुनुभयो। हामीलाई महिमामा डोर्‍याउन, भगवानले येशूलाई दुःख भोग्नु र मर्न खुसी हुनुभयो (हिब्रू २:१०)। किनभने उहाँ हामीलाई छुटकारा दिन चाहानुहुन्छ, उहाँ हामी जस्तै हुनुभयो; केवल हाम्रो लागी मर्दा उसले हामीलाई बचाउन सक्छ।
"किनकि बच्चाहरु मासु र रगतका हुन्, उनले पनि यसलाई बराबर मापन मा स्वीकार गरे, ताकि उसको मृत्यु को माध्यम बाट उसले मृत्यु बाट शक्ति, अर्थात् शैतान बाट शक्ति लिने, र मृत्यु को डर को माध्यम बाट सम्पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउने जीवन। नोकर हुनुपर्यो "(२.१४-१५)। परमेश्वरको अनुग्रहले, येशूले हामी प्रत्येक को लागी मृत्यु भोग्नुभयो (२:))। "... ख्रीष्ट एक पटक पापको लागी दुखी हुनुहुन्थ्यो, धर्मी अधर्मीहरुको लागी, ताकि उसले तिमीहरुलाई भगवानकहाँ लैजान्छ ..." (१ पत्रुस ३:१))।
येशूले क्रूसमा येशूले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरामा ध्यान दिन बाइबलले हामीलाई धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ। हामी निश्चित रूपमा विस्तृत रूपमा बुझ्दैनौं कसरी सबै कुरा "अन्तर्निहित", तर हामी स्वीकार गर्दछौं कि यो यस्तै हो। किनभने उहाँ मर्नुभयो, हामी आनन्दित भई परमेश्वरसँग अनन्त जीवन बाँड्न सक्छौं।
अन्तमा, म क्रसको अर्को पक्ष लिन चाहन्छु - त्यो मोडेलको:
«यसमा परमेश्वरको प्रेम हामीहरु बिच प्रकट भयो, कि भगवानले आफ्नो एक मात्र छोरालाई संसारमा पठाउनुभयो कि हामी उहाँको माध्यम बाट बाँच्न पर्छ। यो के हो प्रेम मा समावेश छ: यो होइन कि हामीले भगवानलाई माया गर्यौं, तर कि उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो र हाम्रा पापहरुको प्रायश्चित हुनको लागी आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो। प्रिय हो, यदि भगवानले हामीलाई यति माया गर्नुभयो भने, हामी पनि एक अर्कालाई माया गर्नुपर्छ "(१ यूहन्ना ४: -1 -११)।